Georgina Rodriguez oo noqotay Timo-jaraha cusub ee Cristiano Ronaldo muddada lagu jiro karaantiilka Coronavirus – Gool FM
(Yurub) 05 Abril 2020. Weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaanan ka caajisin inuu is-qurxiyo xitaa hadduu dunida ku jirto xaalad karaantiilka ah oo uu sababay xanuunka faafidda ee coronavirus.
Ronaldo ayaa sameystay hab jarriin cusub waxaana timo-hagaajiye ama timo-jare u noqotay gabadha uu jecel yahay ee Georgina Rodriguez.
Kabtanka Portugal ayaa u muuqday mid qanaaco badan ay ka muuqatay, iyadoo saaxiibtiisa ay tinta u jareyso kaddib muuqaal uu soo galiyay bartiisa Instagram-ka, waxaana uu ku dhawaaqayay “SIUUUU” oo ah dabaal degga uu caanka ku yahay marka uu gool dhaliyo.
Muuqaalka waxaa ka muuqday Georgina oo tinta u jareysa CR7, waxaana uu soo raaciyay qoraal u dhignaa: ”Jooga guriga, isna qurxiya.”
Si kastaba ha ahaatee, Ronaldo ayaanan ka tagin inuu dadka ku wacyi geliyo inay joogaan guryahooda si ay u yaraato faafidda caabuqa Coronavirus.
Maxay tahay sirta ka dambaysa in Kooxda Liverpool ay ku ciyaarto labis casaan ah?... (Ka bogo sheekada dhabta ah)